Faalo Wasiir Aniso Xaaji Muumin Halyeeyad Qaran
Home /Blog/Faalo Wasiir Aniso Xaaji Muumin Halyeeyad Qaran
Muddo yar kadib markii baarlamaanka Puntland uu kalsoonida kala laabtay dhammaan golihii wasiirada, ayaa madaxwayne Cabdiweli Cali Gaas waxaa uu soo dhisay gole wasiiro ah oo intooda badan ay horay shaqada u joogeen.
Wakhti yar kadib gobolada kala duwan ee Puntland iyo baraha ay bulshadu ku xiriirto, waxaa qabsaday hadal haynta sababta wasiirad Anisa Xaaji Muumin ay uga mid noqon wayday wasiirada cusub.
Shacabka ayaa muujiyay sida ay uga xunyihiin tallaabadaas, waxayna u arkeen in wasiirad Anisa ay shaqo fiican dalka u haysay.
Odayaasha beesha ay kasoo jeedo wasiirad Anisa Hajimumin oo shir ku yeeshay dalka Ingiriiska ayaa dhankooda arrintaas ku tilmaamay mid nasiib xumo ah, isla markaana aan laga fiirsan.
Shir jaraa’id oo ay qabteen ayay ku sheegeen in Anisa Xaaji ay tahay qof qaran isla markaana aanay ahayn qof qabiil gaar ah metesha.
Maxaa u qabsooamay W/Haweenka Puntland mudadii ay joogtay Anisa Cabdiqaadir X. Muumin?.
Tan iyo markii la dhisay xukuumadda cusub ee uu hoggaamiyo C/wali Cali Gaas, waxaa isbedel muuqda laga dareemay shaqada ay bulshada u hayso wasaaradda arimaha haweenka iyo qoyska ee Puntland.
Waxaan qormadan si kooban ugu eegaynaa wax qabadkii wasaaradda tan iyo sanadkii 2014-kii.Maamulka wasaaradda ayaa dejiyay siyaasado lagu hagayo shaqada mudada soo socota, iyada oo si faah-faahsan mid walba loo qeexay, waxaana kamid ah:-
W/Q. Suldaan Maxamed Xaaji
Madaxweynaha Jubbaland oo Kismaayo kusoo dhaweeyay Senator Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Faroole (SAWIRO)
Wasiir Cabdi Xoosh oo xafiiskiisa ku qaabilay wafdi ka socday Midowga Yurub